बिचार/ब्लग Archives - Page 44 of 45 - Sawal Nepal
दुबईमा काम गर्दागर्दै एमबिए पास गरेँ
मेरो घर गोरखाको ताप्ले गाविसको वडा नं ३ मा पर्छ । अहिले काठमाडौंको बानियाँटारमा बस्छु । मलाई रोजगारीका लागि विदेश जाने इच्छा थिएन । तर परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पैसा कमाउन २००९ अगस्ट ९ मा दुबई गएँ । काठमाडौको मुनड्रप्स म्यानपावरमा एकाउन्टेन्टका लागि आफ्नो डकुमेन्ट छोडेको थिएँ । पढाईतिर ब्यस्त भएकाले मैले चासो पनि दिइन
प्रधानमन्त्रीज्यू ! कुरा र केमेष्ट्री मिलाउने जनतासंग कि शक्तिकेन्द्रसंग ?
कृष्ण सरगम भट्टराई-मेरो फेसबुकमा रहेका मनपर्ने मित्रहरु मध्ये एउटा छन्: राम ढुंगाना । परदेशमा रहेर पनि देशप्रति चिन्तित र अग्रगामी विचार राख्ने ती मित्रले दुई दिन अघि फेसबुक स्टाटसमा बडो लाचारीका साथ ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेको देख्दा मैले लोकतन्त्रको बचाउमा उनको कडा प्रतिकार गरेँ । हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने हल्ला मिडियामा
मृत्यु पूर्जा पाएकी जुम्ली युवतीको गगन थापालाई पत्र
आश्विन ८, २०७३- माननीय स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाज्यू, नमस्कार । खासमा जुन दिन मलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले मृत्युको पुर्जा दिएर घरमै मृत्यु कुर्न भन्यो । त्यो दिन, मेरो यो १९ वर्षे कलिलो मन कस्तो भयो होला, हजुरलाई के भनुँ म । तर, म त्यसदिन खुब रोए । नरोएर के गरूँ । मेरो मुटु यति शोकाकुल र
सुदर्शन बजगाई- बालबालिका लाई शिक्षा प्रदान गरिने ठाउँ लाई सरकारले शान्ति क्षेत्र भनेतापनी विभिन्न राजनैतिक संघ संघठनको निशानामा बिद्यालय पार्ने गरेको छ जसको पछिल्लो उदाहरणको राजधानीको जोरपाटी लगाएतको विभिन्न ठाउँको बम काण्ड हो । देशमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको सरकारी स्कुलको दुरदशा र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकेका कारण निजी संस्थागत बिद्यालयमा बालबालिकालाई पढाउन पठाउनु
शैलेन्द्र घिमिरे – यतिबेला म टेलिभिजनको सेटमा हिन्दी टेलिसिरयल ‘अशोका’ हेरिरहेको छु । भारतवर्षको एक महानायक ! युद्ध र शान्तिको एक अदभूतमिलन ! नायकहरु यसरी नै निर्माण हुन्छन् । भूकम्पहरु आउँछन् र जान्छन् । महानायकहरुले इतिहासका ती कठिन समयको नेतृत्व गर्छन् र समयलाई निर्देश गर्दै अगाडि बढ्छन् । प्रचण्ड फेरि पनि त्यही हुन् तर घरीघरी
मयमनसिंहमा प्राइभेट कोठा नपाइए पनि ढाकामा पाइन्छ भनेर रुद्र भनिरहन्थ्यो । तर, म कसरी ढाका जान सक्थेँ र ! रेलमा चढेर एक्लै जान त सक्थेँ होला, तर घरबाट अनुमति देलान् र ! अन्त्यमा सान्दाइ मयमनसिंह आएका वेला ढाका जान जिद्दी गरेँ । ‘पहिलो वर्षको जाँच पास गरेको प्रमाणपत्र लिन ढाका जान्छु,’ भनेँ । ढाका पुग्नेबित्तिकै
सरिता अर्याल म नेपालमा एक निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षिका थिएँ । श्रीमान् पनि एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो । हामी दुई श्रीमान् श्रीमती, हाम्रा दुई छोराछोरी— सानो सुखी परिवार । काठमाडौँमा एउटा पुस्तेनी घर थियो । हाम्रो भागमा तीन कोठा लाग्यो । हामीलाई बस्न तीन कोठा नै हामीलाई प्रर्याप्त थियो । घर भाडा तिर्नु नपर्नेभएकाले
जंगलमा एउटा काग बस्दथ्यो । ऊ निकै खुसी थियो । यत्तिकैमा एकदिन उसले एउटा सेतो हाँस देख्यो । हाँसलाई नजिकबाट नियाल्दै उसले सोच्यो, ‘यो हाँस कति सेतो छ, तर म यस्तो कालो । यो त संसारकै सबैभन्दा खुसी र सुन्दर चरा होला ।’ उसले हाँसलाई भेटेर यो कुरा सुनायो । कागको कुरा सुनिसकेपछि हाँसले भन्यो,
निगमको साख र नयाँ जहाज
नेपाल वायुसेवा निगम फेरि एक पटक जुर्मुराउने प्रयत्नमा छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेवानिलाई दुई वटा वाइड बडी (एयरबस) जहाज किन्न आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनका लागि सरकार जमानी बस्न तयार भएपछि यसले जुर्मुराउने अवसर पाएको हो। निगमले विगतमा लन्डन, पेरिस, फ्रान्कफर्ट, ओसाका, सांघाइलगायतका लामो दूरीमा सेवा दिइसकेको छ। विगतका यी सेवाप्रति सेवाग्राही सन्तुष्ट थिए। तर,
सधैँझैँ बिहान ५ः३० मा उठेँ । पानी खाएर फ्रेस भएँ । कोठा नजिकै मालिकाजुर्न मन्दिर छ । त्यहाँ गएर पूजा पाठ गरेँ । बिहान जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा शिक्षा दिवस कार्यक्रम थियो । अर्को साक्षरता दिवस पनि थियो । यी दुवै कार्यक्रम एउटै ठाउँमा थिए । म यी दुवै कार्यक्रममा सहभागी भएँ । यसको आयोजना जिल्ला